Xildhibaan Cabdixakiin Macallin Axmed (Galmudug): “Magaaladaan Muqdisho ammaankeeda haddaadan waxba ka qaban karin isaga tag dal wax uma qaban kartide.” (dhegayso) – Radio Daljir
Xildhibaan Cabdixakiin Macallin Axmed (Galmudug): “Magaaladaan Muqdisho ammaankeeda haddaadan waxba ka qaban karin isaga tag dal wax uma qaban kartide.” (dhegayso)
Seteembar 19, 2018 2:47 b 0
Xildhibaan Cabdixakiin Macallin Axmed, ahna Xildhibaan laga soo doorto Galmudug, ayaa shalay khudbad qiiro leh ka jeediyey Baarlamaanka Soomaaliya, bannaankana soo dhigay su’aalo aan hore la isku weydiin, kuna eedeeyey Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa iyo ay ku fashilantay hoggaankii dalka.
Xildhibaanka oo tusaale u soo qaatay waxa ku dhacay garoomadii Xamar ee kubbada lagu cayaari jirey ayaa yiri, “Magaaladaan Muqdisho meel walba xaafad walba garoon baa ku yaalay. Dadka indhaha … yaan hadlin oo waxba ha sheegin [yaan la dhihin] … meeye garoomadii ciyaarta lagu ciyaari jiray? … Xaggee aadeen garoomadii? Amarkee ku xiranyihiin, yaa xiray? Ma Xukuumadda … ma Wasaaradda Arrimaha Gudaha baa warqad soo saartay lagu xirayo? Mise Shabaab baa xiray? Ha hadlin ha sheegin miyaad I leedahay?”
Xildhibaanka oo ka dhiidhinaya ammaan-xumida Xamar la soo daristay ayaa ku daray, “magaaladaan Muqdisho ammaankeeda haddaadan waxba ka qaban karin isaga tag dal waxba uma qaban kartide. Dadka Soomaaliyeed yaynaan sirin. Waqtiga yaynaan ka dhuminin. Xildhibaanada sharafta lihi waajibkooda dastuuriga ha qaateen.”
Hoos ka dhegayso oo kaga bogo oo fadlan fiiradaada iyo falcelis nala qaybso.
Xildhibaan Cabdixakiin Macallin Maxamed ayaa sheegay in xukuumaddu ay ku fashilantey sugidda amniga dalka, ayna tahay inay meesha isaga dhaqaadqo.-Doodda Amniga ee Golaha Shacabka.
Posted by Goobjoog on Tuesday, September 18, 2018
Siyaasadda & Dhaqaalaha 496 Wararka 24935
Wariye xalay lagu dilay Gaalkacyo
Saaka & Dunida iyo Maxamuud Cabdi Ibraahim (MCI), Daljir Bossaso (dhegayso)